Mbadamba ígwè, Ngwongwo na-anaghị edozi, Pipe Pipe - Kunda
Anyị ipuiche amị na-eyi na-eguzogide ígwè efere, ihu igwe na-eguzogide ígwè efere, alloy ígwè efere, elu-ike ígwè efere, eyi na-eyi na-eguzogide mejupụtara efere, tank efere, elu-mgbali arịa efere, na shipboard ígwè efere. Ọzọ
AKW STKWỌ ígwè
EGO NA-ADFGHON EGO
Carbon ígwè efere, carbon steel mpempe akwụkwọ, carbon ígwè eriri igwe Carbon ígwè bụ ígwè na carbon ọdịnaya ruo 2.1% site na ibu ibu. Oyi Rolling Carbon ígwè efere ọkpụrụkpụ n'okpuru 0.2-3mm, na-ekpo ọkụ Rolling Carbon efere ọkpụrụkpụ 4mm ruo 115mm Q195 (ST33), Q215A 、 Q215B ， Q235A 、 Q235B (SS400) 、 Q235C 、 Q235D ， Q255A ...
Efere ígwè ndị na-eguzogide na-ezo aka na ngwaahịa ndị efere pụrụ iche ejiri n'okpuru ọnọdụ akwa. Ka ọ dị ugbu a, efere ndị na-eguzogide ọgwụ ndị a na-ejikarị eme ihe bụ efere nke carbon nkịtị ma ọ bụ nchara ala dị ala nke nwere ezi ike na plastic site na ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ na ...
A ga-ekpughere Nchara igwe na ikuku na ikuku na-enweghị eserese. Ọ na-amalite nchara nchara n'otu ụzọ ahụ dị ka nchara nkịtị. Ma n'oge na-adịghị anya, ihe ndị na-eme ka mmiri dị na ya na-eme ka ihe mkpuchi dị nchara nke ọma na-etolite, si otú ahụ na-egbochi ọnụego nchara. Ihu igwe na-egosipụta ezi ihe ngosi ...
Igwe anaghị agba nchara efere nwere ezigbo elu, plasticity dị elu, ike na n'ibu ike, na-eguzogide corrosion site asịd, alkaline gas, ngwọta na ndị ọzọ na media. Ọ bụ ihe alloy ígwè na-adịghị mfe nchara, ma ọ bụ nnọọ ajari-free. Igwe anaghị agba nchara efere na-ezo aka ...
carbon ígwè square mmanya
igwe anaghị agba nchara gburugburu mmanya
carbon ígwè square anwụrụ
carbon ígwè gburugburu anwụrụ
Efere ndu kwesịrị ịdị 4 ruo 5 mm ọkpụrụkpụ iji kpuchido radieshon. Akụkụ bụ isi nke efere ndu bụ ndu, nha ya dị arọ, njupụta dị elu; Ndu efere bụ ụdị efere mere site n'ibu ịpị metal ụzọ ingots mgbe agbaze. Ọ nwere ọrụ nke nchedo radieshon, corrosio ...
O nwere nguzogide corrosion siri ike, acid na alkali eguzogide, mmekorita gburugburu ebe obibi nke acid, nchedo radieshon, X-ray, CT radiation radiation radiation, mbibi, mkpuchi mkpuchi na otutu ihe ndi ozo, ma obu ihe nkpuchi radieshon. Ndị nkịtị ...
Aluminom bụ ọla ọcha na ọkụ ọla ọcha, kewara n'ime aluminom na aluminom dị ọcha. N'ihi na ọ bụ ductility, na-emekarị ka ọ bụrụ mkpanaka, mpempe akwụkwọ, udi eriri. Enwere ike kewaa ya: aluminom efere, eriri igwe, warara, ọkpọkọ, na mkpanaka. Aluminom nwere ihe di iche-iche di nma nke ukwu, ya mere o nwere ...
Companylọ ọrụ anyị bụ enyemaka nke Laiwu Steel ma hiwe ya na 2010 site na nnabata nke Bureau of Industry and Commerce. Site na isi ndebanye aha nke RMB 1 ijeri, ọ bụ ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ nke nwere njirimara nchara na China.
Anyị ipuiche amị na-eyi na-eguzogide ígwè efere, ihu igwe na-eguzogide ígwè efere, alloy ígwè efere, elu-ike ígwè efere, eyi na-eyi na-eguzogide mejupụtara efere, tank efere, elu-mgbali arịa efere, na shipboard ígwè efere.
Ngwaahịa Akụkọ Gbasara Anyị Kpọtụrụ anyị
Arụ ọrụ, na ntụkwasị obi
Anyị bụ ndị gị n'ụlọnga nke ama Steel ụlọ mmepụta ihe na China.We ike 100% hụ na anyị na ngwaahịa mma. Nke abuo: Anyị nwere ebe nhazi nke aka anyị, nke nwere ike ịnye ọrụ ahaziri iche. Dị ka ekwe, ịgbado ọkụ, polishing, nchara-ọgwụgwọ, kpaliri. Kpọtụrụ Onye Ọkachamara